Damaashaadka Hilbaysiga & Feenashada Soomaaliya ee London – Radio Daljir
Maajo 11, 2017 2:45 b 4
Abukar Arman & Shirka London: Khudbadda Farmaajo “Mar I Dage Alle ha Dago. Laba Goor I Dage se Anaa is Dagay” yaysan ka Badan
Qoraal cinwaankiisu yahay “Damaashaadka Hilbaysiga iyo Feenashada Soomaaliya ee London” oo uu nala qaybsaday Siyaasi ahna qoraa sare Abukar Arman, ayuu shirka London ku sifeeyey mid Soomaalidu si nasteexo leh uga doodday meel kasta oo ay joogaan. Mar kale ayuu hadana Abuukar si xirfad leh u tilmaamay taariikhda madow ee gumaysiga Ingiriiska oo illaa iyo maanta dhaxalkeedu yahay in dhiiggu dareero Soomaaliya iyo Geeska Afrika.
Intaas Abuukar ugama harin ee wuxuu tilmaamay sida mucjisada leh ee siyaasadda Ingiriisku ay hal mar soobooddo u noqotay, uga soo dhexmuuqatay, una boobtay hankii sare ee siyaasadda dalka.
Qoraagu wuxuu tilmaan gaar ah ka bixiyey shirkadda Soma Oil & Gas, ahna yuu yiri shirkad siyaasadaysan oo cir-ka-soo-dhac ah, oo hadana maalmo gudahood markii la aasaasay laga diiwaangaliyey Karibiyaanka. Abuukar wuxuu qoray, “Soma Oil waa kambani aan khibrad shidaal iyo maal toona midkoodna lahayn. Waa shirkad qol mugdi ah lagu aasaasay, loona aasaasay in ay noqoto tan kaliya ee iska leh shidaalka saliida iyo kan gaaska ee Soomaaliya.”
Waxaa kale oo xiisa gaar ah xambaarsan buu yiri Abuukar in Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo xiriir aad u dhow la lahaa xukuumaddii tan ka horraysay ee Madaxweyne Xasan Shiikh uu hadana ahaa Agaasimaha Guud ee shirkadda Soma Oil & Gas, markii xukuumadda cusub dhalatayna loo magacaabay booska sare ee dalka.
Ingiriiska oo welwel aad u weyn iyo duufaan aan la saadaalin karin ay ka soo wajahday ‘Brexit” iyo ka bixitaanka Midowga Yurub ayaa hadda isku diyaargarayna hadafka siyaasadeed ee “ku cunay ama ku ciideeyey.” Hadafkaan waxaa huggaan u ah Soma Oil & Gas.
Siyaasadda labaad ee Ingiriiska ayaa Abuukar qoray in ay tahay in “Ingiriisku khalkhal galiyo xiriirka Turkiga iyo damaceeda Soomaaliya, dhan ka beensheegid iyo dhan mijaxaabin siyaasadeedba.”
Siyaasadda Ingiriiska ee Geeska Afrika waxaa huggaan uga ah Imaaraadka ayuu ku daray Abuukar, waxayna mar hore la wareegeen badda Berbera, tan Bossaso, walina waxaa socda heshiisyo kale oo u dhexeeya Imaaraadka iyo Puntland. Waxaas oo heshiis ahna midkoodna lalama socodsiin dawladda federaalka ee Soomaaliya, ayuu ku daray Abuukar.
Gabagabada qoraalka ayuu Abuukar ku xusay danta Ingiriisku waa danta Ingiriiska, marka waa muhiim in aysan dadka Soomaalidu la yaabin indhasarcaadiska Ingiriiska iyo argagixiso-la-dirir aan meelna jirin iyo cayrsiga gabar caddaan ah oo aan la arag, laakiin la maqlo in ay “rati ku fakatay” oo Soomaaliya u soo carartay. Waa indhasarcaadiskii aad maqli jidheen buu qoray Abuukar ee maaweelada “hadda arag, maya, hadda waxba uma jeedid!”
intaas oo macluumaad ah oo la wada ogyahay, Abuukar wuxuu ku daray, maanta Madaxweyne Farmaajo waxa u furan oo kaliya waa in uu boor iyo habaas inta kiciyo, uu danta dadkiisa iyo tan dalkiisa garto, uu madaxweynanimadiisa badbaadiyo, oo khudbad dheer iyo hadal-tiro toona looma baahna e, uu tabbeele weyn qaato oo ay ku qorantahay: “Mar I dage Alle ha dago. Laba goor I dage se anaa is Dagay.”
Qoraalka oo afka Ingiriisku ku qoran HALKAN RIIX.
Qormooyinka Daljir 54 Siyaasadda & Dhaqaalaha 499 Wararka 25390
Garaad Cabdullaahi Cali Ciid: “Ingiriiska iyo Maraykanku waxay ku Tartamayaan Siyaasadda Soomaaliya”
cc 4 years ago
Hasan Jama 4 years ago
Abuukar Arman fekirkiisa ka hadlay ee ma ahan xaqiiqada meesha ka jirta. shir caalami ayuu aha ee ma ahan mid kaliya quseeysa UK. Nin fekirkiisa ka hadlay oo ku saabsan Negativism of Somali forward. Aqoonyahan caafimaad qaba sidaa uma qora qoraalkiisa.
Shirwac Abdisamed 4 years ago
Asc Daljir Shirka birato UK uga furmayo Ma da da Soomaalida aad baaan usoo dhaweenayaaa waxaan Alle kabaryaaa inuu noqdo shirkii lagu Caano ma a ala balse uusan noqon kiii lagu khasaaro hur usocod dadkeygo thanks Daljir.com